I-Q & A ejikeleze i-COVID-19 kwiilwimi zaseAfrika zommandla- iAfrArAriv
E papashwe ngu Iqela le -AfRXiv on I-25ti ngo-Matshi 2020 I-25ti ngo-Matshi 2020
Ukuhanjiswa kolwazi malunga neyona misebenzi iphambili kunye neendlela zokuziphatha zokunciphisa ukusasazeka kwecoronavirus kubonelelwa ngesiNgesi. Malunga ne-2000 iilwimi zalapha ekhaya zithethwa e-Afrika kwaye abantu banelungelo lokwaziswa ngolwimi lwabo malunga noko kwenzekayo nendlela abanokuzikhusela ngayo, kwiintsapho zabo, kubahlobo nakwabo basebenza nabo.
Ubonile ukuba ungalutshintsha ulwimi lwewebhusayithi yethu? Okwangoku, sinika umxholo wethu kwezi lwimi zilandelayo:
Nceda qaphela: Iwebhusayithi yeArthurXiv iguqulelwe ngokuzenzekelayo yi I-GTranslate.io nge-plugi ye-wp ukusuka kwisiNgesi ukuya kwiilwimi ezili-19. Uguqulelo lulungile kodwa alufezekanga. Ungasinceda Ukuphucula isicatshulwa esiguquliweyo kwiwebhusayithi yethu? Nceda undithumelele i-imeyile igalelo@africarxiv.org. | Isikhokelo: github.com/AfricArxiv/…/inguqulelo.md
Funda ngakumbi ngokwahluka kweelwimi kunxibelelwano lwabafundi baseAfrika olungendawo.
Nceda ufumane ngezantsi ulwazi olunikezwe yi I-ofisi yengingqi ye-WHO // ifunyenwe ngoMatshi 25, 2020:
I-Q & A ye-WHO kwi-coronaviruses (i-COVID-19)
Amazwe ase-Afrika asuka kwi-COVID-19 ukulungela ukuphendula njengoko uninzi luqinisekisa iimeko
Uluntu lwehlabathi lubaleka ukunciphisa isantya kwaye ekugqibeleni ukumisa ukusasazeka kwe-COVID-19, ubhubhane oluye lwabulala amawaka abantu kwaye bagula amashumi amawaka abanye. E-Afrika, intsholongwane isasazekile kumazwe aliqela kwiiveki nje ezimbalwa. Oorhulumente nabasemagunyeni kwezempilo kwilizwekazi lonke bazabalazela ukunciphisa ukusasazeka kwezifo.
Ukusukela ukuqalisa kokuqhambuka koMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) bexhasa oorhulumente base-Afrika ngokufunyanwa kwangoko ngokunika amawaka e-COVID-19 izixhobo zokuvavanya kumazwe, ukuqeqesha uninzi lwabasebenzi bezempilo kunye nokomeleza ukubekwa kweliso eluntwini. Amashumi amane anesixhenxe amazwe akwi-WHO kwingingqi ye-Afrika ngoku angavavanya i-COVID-19. Ekuqaleni kokuqhambuka kuphela ezimbini ezinokwenza oko.
I-WHO ikhuphe isikhokelo kumazwe, ahlala ehlaziywa ukuze athathe ingqalelo imeko yokuvela. Esi sikhokelo sibandakanya amanyathelo anjengokuhlala yedwa, ukuphindiswa kwabemi kunye nokulungela kwiindawo zomsebenzi. Umbutho uyasebenza nothungelwano lweengcali ukulungelelanisa iinzame zokuhlola, isifo sephepha, umfuziselo, isifo, ukhathalelo lweklinikhi kunye nonyango, kunye nezinye iindlela zokuchonga, ukulawula isifo kunye nokunciphisa ukusasazeka kwezifo ngokubanzi.
I-WHO ibonelela ngenkxaso ekude namazwe achaphazelekayo kusetyenziso lwezixhobo ze-elektroniki zedatha, ukuze amagunya ezempilo kuzwelonke akuqonde ngcono ukuqubuka kwamazwe abo. Ukulungiselela kunye nokuphendula kwizibetho zangaphambili kubonelela ngesiseko esiqinileyo samazwe aseAfrika ukulwa nokusasazeka kwe-COVID-19.
Ngokubalulekileyo, amanyathelo okhuselo asisiseko omntu kunye noluntu ahlala esisixhobo esinamandla sokuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19. I-WHO inceda abasemagunyeni bobugcisa kwimiyalezo yerediyo kunye namabala e-TV ukwazisa uluntu ngobungozi be-COVID-19 kwaye ngawaphi amanyathelo anokuthathwa. Umbutho uyanceda ekuchaseni intsholongwane kwaye ukhokela amazwe ekumiseleni amaziko emnxeba ukuqinisekisa ukuba uluntu luyaziswa.
I-Q & A kwi-coronaviruses (COVID-19)
>> Who.int/news-room/qa-detail/qa-coronaviruses // 9 Matshi 2020 | Imibuzo neempendulo
I-WHO ibeka iliso ngokuqhubekayo kwaye iyaphendula koku kuqhambuka. Le Q&A iyakuhlaziywa njengoko isaziwa ngakumbi nge-COVID-19, ukuba isasazeka njani kwaye ibachaphazela njani abantu kwihlabathi liphela. Ngolwazi oluthe kratya, jonga kwakhona rhoqo Amaphepha e-coronavirus e-WHO.
Ii-Coronaviruses yintsapho enkulu yeentsholongwane ezinokubangela ukugula kwizilwanyana okanye ebantwini. Emntwini, ii-coronavirus ezininzi ziyaziwa ukuba zibangela usuleleko lokuphefumla ukusuka kubanda obuqhelekileyo ukuya kwizifo ezibi kakhulu ezinjenge-Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kunye ne-Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Eyona coronavirus yamva nje ebangela isifo se-coronavirus COVID-19.
I-COVID-19 sisifo esosulelayo esibangelwa sisona sisona sifo sigqibeleleyo. Le ntsholongwane intsha kunye nesifo yayingaziwa ngaphambi kokuba kuqalise ukuqhambuka eWuhan, China, ngoDisemba ka-2019.
Zeziphi iimpawu ze-COVID-19?
Ezona mpawu zixhaphakileyo ze-COVID-19 ngumkhuhlane, ukudinwa kunye nokukhohlela okomileyo. Abanye abaguli banokuba neentlungu kunye neentlungu, ukuxinana kwempumlo, ukuphuma kwempumlo, umqala obuhlungu okanye urhudo. Ezi mpawu zihlala ziphakathi kwaye ziqala kancinci. Abanye abantu bosuleleka kodwa ababi nazimpawu kwaye baziva bengaphilanga. Uninzi lwabantu (malunga ne-80%) luyachacha kwesi sifo ngaphandle kokufuna unyango olukhethekileyo. Malunga nomntu omnye kwabathandathu ofumana i-COVID-1 ugula kakhulu kwaye aphefumle nzima. Abantu abadala, kunye nabo baneengxaki zonyango ezinje ngoxinzelelo oluphezulu lwegazi, iingxaki zentliziyo okanye isifo seswekile, banamathuba okuba bagule kakhulu. Abantu abanomkhuhlane, ukukhohlela kunye nokuphefumla nzima kufuneka bafune unyango.
Ngaba i-COVID-19 isasazeka njani?
Abantu banokubamba i-COVID-19 kwabanye abanentsholongwane. Isifo sinokusasazeka ukusuka emntwini sisiya komnye umntu ngamachaphaza amancinci aphuma empumlweni okanye emlonyeni osasazekayo xa umntu ene-COVID-19 ekhohlela okanye iexles. La manqolomba ahamba phezu kwezinto nezinto ezingaphezulu komntu. Abanye abantu emva koko babamba i-COVID-19 ngokuchukumisa ezi zinto okanye umphezulu, emva koko bachukumise amehlo abo, impumlo okanye umlomo. Abantu banokubamba i-COVID-19 ukuba baphefumla ngamaconsi emntwini one-COVID-19 ophilayo okanye okhupha imigqomo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba uhlale ngaphezulu kwemitha enye (1 iinyawo) kude nomntu ogulayo.
I-WHO ihlola uphando oluqhubekayo malunga neendlela ze-COVID-19 ezisasazekayo kwaye ziya kuqhubeka nokwabelana ngeziphumo ezihlaziyiweyo.
Ngaba intsholongwane ebangela i-COVID-19 ingasasazeka emoyeni?
Uphononongo ukuza kuthi ga ngoku lubonisa ukuba intsholongwane ebangela i-COVID-19 idluliselwa ikakhulu ngokudibana namathontsi okuphefumla kunokuba idlule emoyeni. Jonga impendulo yangaphambili ku- "I-COVID-19 isasazeka njani?"
Ngaba i-CoVID-19 ingabanjwa kumntu ongenazimpawu?
Eyona ndlela sisasazeka ngayo esi sifo kukusebenzisa amathontsi okuphefumla agxothwe ngumntu okhohlela. Umngcipheko wokubamba i-COVID-19 kumntu ongenazimpawu kwaphela uphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, uninzi lwabantu olunamava e-COVID-19 kuphela lweempawu ezibuthathaka. Oku kuyinyani ngokukodwa kwinqanaba lokuqala lesi sifo. Kuyenzeka ke ukuba ubambe i-COVID-19 kumntu othi, umzekelo, ukhohlele nje kancinane kwaye angaziva egula. I-WHO ivavanya uphando oluqhubekayo ngexesha lokudluliselwa kwe-COVID-19 kwaye iya kuqhubeka nokwabelana ngeziphumo ezihlaziyiweyo.
Ndingakwazi ukubamba i-COVID-19 kwilindle lomntu onesifo?
Umngcipheko wokubamba i-COVID-19 ukusuka kumngxunya womntu owosulelekileyo ubonakala uphantsi. Ngelixa uphando olwenziweyo luveza ukuba intsholongwane inokuba ikho kwi-feces kwezinye iimeko, ukusasazeka kule ndlela akuyona into ephambili yokuqhuma. I-WHO ihlola uphando oluqhubekayo malunga neendlela ze-COVID-19 ezisasazekayo kwaye ziya kuqhubeka nokwabelana ngeziphumo ezintsha. Ngenxa yokuba lo mngcipheko, nangona kunjalo, sesinye isizathu sokucoca izandla rhoqo, emva kokusebenzisa igumbi lokuhlambela kunye ngaphambi kokutya.
Ngubani osengozini yokufumana isigulo esiqatha?
Ngelixa sisafunda malunga nendlela i-COVID-2019 ebachaphazela ngayo abantu, abantu abadala kunye nabantu abaneemeko zonyango esele zikhona (ezinje ngegazi, isifo sentliziyo, isifo semiphunga, umhlaza okanye isifo seswekile) kubonakala ngathi bakhula ngokugula kakhulu kunabanye.
Ngaba iintsholongwane ziyasebenza ekuthinteleni okanye ekunyangeni i-COVID-19?
Hayi. Iintsholongwane azisebenzi ngokuchasene neentsholongwane, zisebenza kuphela kusulelo lwebhakteria. I-COVID-19 ibangelwa yintsholongwane, ke ngoko amayeza okubulala intsholongwane awasebenzi. Amachiza okubulala iintsholongwane akufuneki asetyenziswe njengendlela yokuthintela okanye ukunyanga i-COVID-19. Zifanele zisetyenziswe kuphela njengoko kuyalelwe ngugqirha ukunyanga isifo sentsholongwane.
Ngaba i-COVID-19 iyafana ne-SARS?
Hayi. Intsholongwane ebangela i-COVID-19 kunye neye yabangela ukuqhambuka kweSeve Acute Respiratory Syndrome (SARS) ngo-2003 zihlobene kwaye zivela kwizifo, kodwa izifo ezibangela zahlukile.
I-SARS ibibulala kakhulu kodwa incipha kakhulu kune-COVID-19. Akuzange kubekho kuqhambuko lwe-SARS naphi na emhlabeni ukususela ngo-2003.
Ndingenza ntoni ukuzikhusela nokukhusela ukusasazeka kwezifo?
Amanyathelo okhuselo kuwo wonke umntu
Hlala wazi ulwazi lwakutsha nje ngokuqhambuka kwe-COVID-19, efumaneka kwiwebhusayithi yeWHO nangagunyaziwe wezempilo kawonke wonke kunye nowasekhaya. Amazwe amaninzi kwihlabathi jikelele abonile iimeko ze-COVID-19 kwaye ziliqela zibonile ukuqhuma. Abaphathi eTshayina nakwamanye amazwe baphumelele ekucothiseni okanye ekupheliseni ukuqhuma kwabo. Nangona kunjalo, imeko ayinakulindeleka ke jonga rhoqo kwiindaba zamva nje.
Ungawanciphisa amathuba akho okusuleleka okanye osasaza i-COVID-19 ngokuthatha amanyathelo afanelekileyo okhuseleko:
Rhoqo kwaye ucoce izandla zakho nge-rub esekwe ngesandla okanye uyihlambe ngesepha namanzi.
Ngoba? Ukuhlamba izandla zakho ngesepha kunye namanzi okanye ukusebenzisa i-rub esekwe ngesandla kubulala iintsholongwane ezinokuba sezandleni zakho.
Gcina umgama oziimitha ezi-1 ubuncinci phakathi kwakho naye nabani na okhophayo okanye ukuthunga.
Ngoba? Xa umntu ekhohlela okanye encwina, baphalaza amathontsi amancinci emilebeni yabo okanye emlonyeni anokuqulatha intsholongwane. Ukuba ukufutshane kakhulu, ungaphefumla ngamaconsi, kubandakanya ne-COVID-19 yentsholongwane ukuba umntu okrholayo unesifo.
Kunqande ukuchukumisa amehlo, impumlo kunye nomlomo.
Ngoba? Izandla zichukumisa imiphezulu emininzi kwaye zinokufumana iintsholongwane. Xa sele kungcolisiwe, izandla zinokuyihambisa le ntsholongwane emehlweni akho, impumlo okanye umlomo. Ukusuka apho, intsholongwane inokungena emzimbeni wakho kwaye inokugula.
Qiniseka ukuba, kunye nabantu abakungqongileyo, balandela ucoceko olulungileyo lokuphefumla. Oku kuthetha ukugubungela umlomo wakho kunye neempumlo ngentonga egobile okanye ngezicubu zakho xa ukhohlela okanye uthimla. Emva koko lahla izicubu ezisetyenzisiweyo ngokukhawuleza.
Ngoba? Amaconsi asasaza intsholongwane. Ngokulandela ucoceko olulungileyo lokuphefumla ukhusela abantu abakungqongileyo kwiintsholongwane ezinjengokubanda, umkhuhlane kunye neCOVID-19.
Hlala ekhaya ukuba uziva ungonwabanga. Ukuba unomkhuhlane, ukukhohlela kunye nobunzima bokuphefumla, funa unyango kwaye ubize kwangaphambili. Landela izikhokelo zegunyabantu lempilo lasekuhlaleni.
Ngoba? Amagunya esizwe nawasekhaya aya kuba nolwazi oluninzi ngemeko yengingqi yakho. Ukutsala umnxeba ngaphambi kwexesha kuya kuvumela umboneleli wakho wokhathalelo lwempilo ukuba akukhokelele ngokukhawuleza kwindawo efanelekileyo yezempilo. Oku kuyakukhusela kwaye kuncede ukukhusela ukusasazeka kweentsholongwane kunye nolunye usulelo.
Gcina usesikhathini kwiindawo zakutshanje ze-COVID-19 (iidolophu okanye indawo zendawo apho i-COVID-19 isasazeka ngokubanzi). Ukuba kunokwenzeka, kuphephe ukuhamba uye kwiindawo - ngakumbi ukuba umdala okanye unesifo seswekile, isifo sentliziyo okanye semiphunga.
Ngoba? Unethuba elingaphezulu lokubamba i-COVID-19 kwenye yezi ndawo.
Amanyathelo okhuselo kubantu abangena okanye abasandula ukutyelela (kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo) kwiindawo ekusasazeka kuzo i-COVID-19
Landela isikhokelo esikhankanywe apha ngasentla (amanyathelo okhuseleko kuwo wonke umntu)
Ukuzahlula ngokwakho ngokuhlala ekhaya ukuba uqala ukuziva ungonwabanga, nokuba uneempawu ezibuthathaka ezinje ngeentloko zentloko, umkhuhlane webanga eliphantsi (37.3 C okanye ngaphezulu) kunye neempumlo ezincinci zokuhamba, de ube upholile. Ukuba kubalulekile ukuba ube nomntu oza kukuphathela iimpahla okanye uphume, umzekelo, ukuthenga ukutya, ke nxiba imask ukunqanda ukosulela abanye abantu.
Ngoba? Ukuthintela ukunxibelelana nabanye kunye nokutyelela amaziko ezonyango kuya kuvumela la maziko ukuba asebenze ngakumbi kwaye akuncede ukukhusela wena nabanye kwi-COVID-19 kunye nezinye iintsholongwane.
Ukuba ukhula umkhuhlane, ukukhohlela kunye nobunzima bokuphefumla, funa iingcebiso zikagqirha ngoko nangoko kuba oku kungakho ngenxa yosulelo lokuphefumla okanye enye imeko enobuzaza. Fowuna ngaphambi kwexesha uxelele umboneleli wakho ngalo naluphi na uhambo lwamva nje okanye unxibelelwano nabahambi.
Ngoba? Ukutsala umnxeba ngaphambi kwexesha kuya kuvumela umboneleli wakho wokhathalelo lwempilo ukuba akukhokelele ngokukhawuleza kwindawo efanelekileyo yezempilo. Oku kuyakunceda ukukhusela ukusasazeka okunokwenzeka kwe-COVID-19 kunye nezinye iintsholongwane.
Ndingabamba njani COVID-19?
Umngcipheko uxhomekeke apho ukhoyo-kwaye ngakumbi ngakumbi, nokuba ngaba kukho ukugqabhuka kwe-COVID-19 kwenzeka apho.
Kubantu abaninzi kwiindawo ezininzi umngcipheko wokubamba i-COVID-19 usezantsi. Nangona kunjalo, ngoku kukho iindawo kwihlabathi jikelele (izixeko okanye iindawo) apho isifo sisasazeka khona. Kubantu abahlala, okanye abatyeleleyo, ezi ndawo umngcipheko wokubamba i-COVID-19 iphezulu. Oorhulumente kunye nabasemagunyeni kwezempilo bathabatha inyathelo elinamandla ngalo lonke ixesha kuchongwa ityala elitsha le-COVID-19. Qinisekisa ukuthobela nayiphi na isithintelo sendawo esikuyo ekuhambeni, ekuhambeni okanye kwindibano ezinkulu. Ukusebenzisana nemizamo yokulawulwa kwezifo kuya kunciphisa umngcipheko wakho wokubamba okanye wokusasaza i-COVID-19.
Ukuqhambuka kwe-COVID-19 kungabakho kwaye kuthunyelwe kuyeke, njengoko kubonisiwe e-China nakwamanye amazwe. Ngelishwa, ukuphuma okutsha kunokuvela ngokukhawuleza. Kubalulekile ukuba uyazi imeko okuyo okanye onqwenela ukuya kuyo. I-WHO ipapasha uhlaziyo lwemihla ngemihla kwimeko ye-COVID-19 kwihlabathi liphela.
Ungazibona apha Who.int/emergency/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Lide kangakanani ixesha lokufakwa kwe-COVID-19?
"Ixesha lokufakwa" lithetha ixesha phakathi kokubamba intsholongwane kunye nokuqala ukuba neempawu zesifo. Uninzi loqikelelo lwexesha lokufakwa kwi-COVID-19 ukusuka kwiintsuku ezi-1 ukuya kwezi-14, uninzi luhlala lujikeleze iintsuku ezintlanu. Oluqikelelo luza kuhlaziywa njengoko idatha engakumbi ifumaneka.
Ndingabamba i-COVID-19 kwisilwanyana sasekhaya?
Ngelixa kukho umzekelo omnye wenja osulelekile eHong Kong, ukuza kuthi ga ngoku, akukho bungqina bokuba inja, ikati okanye nasiphi na isilwanyana sasekhaya inokudlulisela i-COVID-19. I-COVID-19 isasazeka ngokusetyenziswa kwamaconsi xa umntu osulelekileyo ekhwehlela, etyibilika okanye ethetha. Ukuzikhusela, coca izandla zakho rhoqo kwaye ucoceke.
I-WHO iyaqhubeka nokubeka esweni uphando lwakutshanje kunye nezinye izihloko ze-COVID-19 kwaye ziya kuhlaziya njengoko iziphumo ezintsha zifumaneka.
Ngaba kukhuselekile ukufumana iphakheji kuyo nayiphi na indawo apho kuye kwanikelwa ingxelo ngeCOVID-19?
Ewe. Amathuba okuba umntu osulelekileyo ongcolisa iimpahla zorhwebo asezantsi kwaye umngcipheko wokubamba intsholongwane ebangela i-COVID-19 ukusuka kwiphakheji ehambisa, ihambile, kwaye ivezwe kwiimeko ezahlukeneyo kwaye amaqondo obushushu nawo asezantsi.
Ngaba kufuneka ndikhathazeke nge-COVID-19?
Ukugula ngenxa yosulelo lwe-COVID-19 ngokubanzi kuthambile, ingakumbi kubantwana nakubantu abancinci. Nangona kunjalo, kunokubangela ukugula kakhulu: malunga nomntu omnye kwaba-1 abayibambayo bafuna ukunyangwa esibhedlele. Yinto eqhelekileyo ukuba abantu bakhathazeke malunga nokuba ukuphuma kwe-COVID-5 kuya kubachaphazela njani kunye nabo babathandayo.
Singakwazi ukuhambisa inkxalabo zethu kwizenzo ukuze sizikhusele, thina kunye nabo sibathandayo kunye noluntu lwethu. Okokuqala nokuphambili phakathi kwezi zinto ziqhelekileyo kwaye kukuhlamba izandla ngokucocekileyo kunye nococeko lokuphefumla. Okwesibini, hlala unolwazi kwaye ulandele iingcebiso zeziphathamandla zempilo zalapho kubandakanya nayiphi na izithintelo ezibekiweyo kuhambo, ukuhamba kunye nokuhlangana. Funda ngakumbi malunga nendlela yokuzikhusela kwi Who.int/emergency/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Ngaba akhona amayeza okanye unyango olunokuthintela okanye lunyange i-COVID-19?
Ngelixa ezinye unyango lwasentshona, lwendabuko okanye lwasekhaya lunokubonelela ngentuthuzelo kunye nokunciphisa iimpawu ze-COVID-19, akukho bungqina bokuba amayeza akhoyo ngoku anokuthintela okanye asinyange isifo. I-WHO ayikukhuthazi ukuzinyanga ngokwakho ngamayeza, kubandakanya amayeza okubulala iintsholongwane, njengokuthintela okanye ukunyanga i-COVID-19. Nangona kunjalo, kukho ulingo oluqhubekayo lweklinikhi olubandakanya zombini amayeza asentshona nawesithethe. I-WHO iya kuqhubeka ukubonelela ngolwazi oluhlaziyiweyo kwakamsinya nje ukuba kufunyanwe iziphumo zonyango.
Ngaba kukho iyeza lokuthintela iyeza, ichiza okanye unyango lwe-COVID-19?
Ayikenzeki. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho chiza kwaye akukho machiza akhethekileyo antiviral ukukhusela okanye ukunyanga i-COVID-2019. Nangona kunjalo, abo bachaphazelekayo kufuneka bafumane ukhathalelo lokunciphisa iimpawu. Abantu abagula kakhulu kufuneka balaliswe esibhedlele. Uninzi lwezigulana ziphinda zibuule ngenxa yenkxaso.
Ugonyo olunokwenzeka kunye nonyango oluthile lweziyobisi luphantsi kophando. Bavavanywa kuvavanyo lwezonyango. I-WHO iququzelela iinzame zokuphuhlisa amayeza okugonya kunye namayeza okuthintela nokunyanga i-COVID-19.
Ezona ndlela zisebenzayo zokuzikhusela wena kunye nabanye ngokuchasene ne-COVID-19 kukusoloko ucoca izandla zakho, ugquma ukukhwehlela kwakho ngomngxunya okanye ngethishu, kwaye ugcine umgama okungenani we-1 yeemitha (3 iinyawo) kubantu abakhohlela okanye ukuntywila. (Jonga Amanyathelo okhuselo asisiseko kwi-coronavirus entsha).
Ngaba kufuneka ndinxibe imaskhi ukuze ndizikhusele?
Nxiba kuphela imaski ukuba ugula uneempawu ze-COVID-19 (ngakumbi ukukhohlela) okanye ukhathalela umntu onokuba ne-COVID-19. Imaski yobuso elahliweyo inokusetyenziswa kanye kuphela. Ukuba awuguli okanye ujonga umntu ogulayo ke uphulukana nemaski. Kukho ukunqongophala kwehlabathi kwimaski, ke ngoko i-WHO ibongoza abantu ukuba basebenzise iimaski ngobulumko.
I-WHO icebisa ukusetyenziswa kwengqiqo kweemaski zonyango ukunqanda inkcitho engeyomfuneko yezixhobo ezixabisekileyo kunye nokusetyenziswa gwenxa kweemaski (Jonga ingcebiso ngokusetyenziswa kwemaski).
Ezona ndlela zisebenzayo zokuzikhusela wena kunye nabanye ngokuchasene ne-COVID-19 kukusoloko ucoca izandla zakho, gquma ukhwehlela ngesaphetha okanye ngesihlunu kwaye ugcine umgama okungenani omalunga neemitha ezi-1 ebantwini abakhohlela okanye otyunyuzayo. . Bona amanyathelo asisiseko okhuselo nxamnye ne-coronavirus entsha ufuna ulwazi olungolunye.
Uyambatha njani, uyisebenzisa, uyikhuphe kwaye uyilahle njani imaski?
Khumbula, imaski kufuneka isetyenziswe kuphela ngabasebenzi bezempilo, abanakekeli, kunye nabantu abaneempawu zokuphefumla, njengomkhuhlane kunye nokukhohlela.
Ngaphambi kokuchukumisa imaski, izandla ezicocekileyo nge-rub esekwe ngesandla okanye isepha kunye namanzi
Thatha imaski kwaye uyivavanye iinyembezi okanye imingxunya.
I-Orient leliphi icala elilelona liphezulu (apho ibreyiti yentsimbi).
Qinisekisa ukuba icala elifanelekileyo lemaski libheke ngaphandle (icala elinemibala).
Beka imaski ebusweni bakho. Cinezela intambo yentsimbi okanye ingqiniba yemaskhi ukuze ibumbe ibe ngathi yeyempumlo yakho.
Tsala ezantsi imaski ukuze igubungele umlomo wakho kunye nesilevu.
Emva kokusetyenziswa, susa imaski; susa ii-loops ezingasemva kweendlebe ngelixa ugcina imaski kude ebusweni nakwizinxibo, ukunqanda ukuchukumisa umphezulu wemasisi.
Lahla imaski kwimgqomo evaliweyo ngoko nangoko emva kokusetyenziswa.
Yenza ucoceko lwezandla emva kokuchukumisa okanye ukulahla imaski-Sebenzisa i-rub esekwe ngesandla okanye, ukuba ibonakele injalo, hlamba izandla zakho ngesepha namanzi.
Ngaba abantu bosuleleka yi-COVID-19 evela kumthombo wesilwanyana?
I-Coronaviruses yintsapho enkulu yeentsholongwane eqhelekileyo kwizilwanyana. Ngamaxesha athile, abantu bosulelwa zezi ntsholongwane ezinokuthi emva koko zisasazeke kwabanye abantu. Umzekelo, i-SARS-CoV yayidityaniswa neekati ze-civet kwaye i-MERS-CoV idluliselwa ziinkamela ezinedrame. Imithombo yezilwanyana enokwenzeka ye-COVID-19 ayikaqinisekiswa.
Ukuzikhusela, njengaxa undwendwela iimarike zezilwanyana bukhoma, kuphephe ukunxibelelana ngqo nezilwanyana kunye nendawo ethe gca ekunxibelelaneni nezilwanyana. Qinisekisa ukuba iindlela zokutya ezifanelekileyo kukutya ngamaxesha onke. Phatha inyama ekrwada, ubisi okanye amalungu ezilwanyana ngononophelo ukuthintela ukungcoliseka kokutya okungaphekiswanga kwaye kuthintele ukutyisa iimveliso zezilwanyana eziluhlaza okanye ezingafakwanga.
Ihlala ixesha elingakanani intsholongwane?
Akuqinisekanga ukuba intsholongwane ibangela ixesha elingakanani i-COVID-19 ihlale phezu komhlaba, kodwa kubonakala ngathi ziziphethe njengezinye izinto ezibonakala ngathi zikho. Izifundo zicebisa ukuba ii-coronavirus (kubandakanya ulwazi lwangaphambi kokuba intsholongwane i-COVID-19) iqhubeke kwindawo ethe gabhu iiyure ezimbalwa okanye ukuya kwiintsuku ezininzi. Oku kunokuhluka phantsi kweemeko ezahlukeneyo (umz. Uhlobo lomphezulu, iqondo lobushushu okanye umswakama wendawo).
Ukuba ucinga ukuba umphezulu ungosuleleka, ucoce ngesibulala ntsholongwane ukubulala intsholongwane kunye nokuzikhusela wena kunye nabanye. Coca izandla zakho ngerub esekwe ngesandla okanye uyihlambe ngesepha nangamanzi. Kunqande ukuchukumisa amehlo, umlomo okanye impumlo.
Ngaba ikhona into endingafane ndiyenze?
La manyathelo alandelayo AYIYI isebenza ngokuchasene ne-COVID-2019 kwaye inokuba yingozi:
Ndinxibe iimaski ezininzi
Ukuthatha amayeza okubulala iintsholongwane (Jonga umbuzo 10 “Ngaba akhona amayeza onyango anokuthintela okanye anyange i-COVID-19?")
Kuyo nayiphi na imeko, ukuba unefiva, ukukhohlela kunye nobunzima bokuphefumla funa unyango kwangoko ukunciphisa umngcipheko wokukhula kosulelo olunzima ngakumbi kwaye uqiniseke ngokwabelana ngembali yakho yakutshanje yokuhamba nomnikezeli wakho wezempilo.
Ndisebenzisa #AI Ukuguqulela "Hlamba izandla zakho" kwiilwimi ezingaphezu kwama-500. Nantsi indlela endenze ngayo kunye nekhonkco kwiinguqulelo: https://t.co/jkXc0ErYOc
Enkosi Ku @lungelo ngomsebenzi wabo kwi-MUSE, eyayibalulekile ekuphumezeni oku!#NLProc #intsholongwane ye-Corona @SILintl pic.twitter.com/3zJrvST3Jc
-Daniel Whitenack (@dwhitena) Matshi 24, 2020
iindidi:	Covid-19Ukwahluka kweeLwimiUkuFikelelaUnxibelelwano lwezobuNzululwazi